“Xisbiga Kulmiye Haku Dhiirado Inuu Taageerayaashiisa U Fasiro Wixii Ka Khaldamay” Xuseen Dayr |
“Xisbiga Kulmiye Haku Dhiirado Inuu Taageerayaashiisa U Fasiro Wixii Ka Khaldamay” Xuseen Dayr
Hargeisa(GNN):-Doorashooyinkii isku-sidkanaa ee 31.05.2021 ka dhacay Somaliland, waxa ka soo bacay dhacdooyin cusub oo xiisa leh oo la xidhiidha hab-dhaqanka codbixiyeyaasha iyo qaabka ay Xisbiyada Qaranka ugu codeeyeen.
Gaar ahaan codbixiyeyaasha ka soo jeeda Gobollada Togdheer iyo M/jeex oo uu Xisbal Xaakimku ku awood badnaa waxa cad in farriin siyaasi ah oo muhiim ah ay u direen Xisbiga Kulmiye ee talada dalka haya.
Fariinta ka timid Gobollada Togdheer iyo M/jeex waa mid siyaasi ah oo saamayn weyn ku leh saaxada siyaasadda dalka. Togdheer iyo M/jeex oo ah laba gobol oo ay ku xidhan tahay guusha iyo guuldarrada xisbiyada Qaranku, farriinta ay direen codbixiyeyaasha labadan gobol waxa loo fasiri karaa sidan:
“is bedele xaaladaha siyaasada ee Togdheer iyo M/jeex, waxna ma ahaanayeen sidoodii hore! Taageeradayada iyo codkayagana looma qaadan karo mid aan weligii is bedelayn ama meel u sii yaala cid gaar ah!!”
• Hadii Xisbiga Kulmiye uu doonayo in uu ka gudbo carqaladaha horyaala una diyaar garoobo loollanka wejiga cusub leh ee siyaasadda dalka,
In aad khaladkaaga qirato maaha calaamad ama sifo muujinaya liitinnimo, laakiin waa sifo iyo sawrac quman oo hoggaamiyenimo. Khaladkaaga oo aad qirataa waxay halbeeg wacan iyo tusaale sax ah u tahay bisaylka siyaasiga ah ee uu masuulku oggol yahay in lagala xisaabtamo wixii khalad ah ee yimaada.